Shirweynihii Caalamiga ahaa ee arimaha Saxaafada + Xuska Maalinta Saxaafada Somaliland oo la soo Gabo-Gabeeyey – SOLJA
Home / Activity / Shirweynihii Caalamiga ahaa ee arimaha Saxaafada + Xuska Maalinta Saxaafada Somaliland oo la soo Gabo-Gabeeyey
Abdishakur Mohamud November 9, 2016	Activity Leave a comment 153 Views
Xuska Maalinta Saxaafadda Oo la xusay iyo Abaal marin loogu Magac daray Allah Ha u naxariistee Marxuum Axmed Xasan Cawke oo Wariyeyaal la gudoonsiiyey, kuwaasi oo ku tartamay Barnaamijyo la xidhiidha Arimaha Bulshada
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo Oo Ka Qayb Galay Shir Weynaha Caalamiga Ah Ee Arrimaha Saxaafadda Somaliland Oo Lagu Qabtay Hargeysa Maanta, Kuna Beegan Xuska Geeridii Aabaha Saxaafada Somaliland Tuur Cabdi Shide.
Hargeysa()Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey munaasibadaasi ayaa yidhi “Milgo iyo maamuus weyn bay ii tahay, in aan ka soo qayb galo munaasabaddan qiimaha badan ee ay isugu yimaadeen Ururka Suxufiyiinta Jamhuuriyadda Somaliland ee SOLJA, si ay uga tashadaan danaha iyo horumarka saxaafadda.
1. Baraaruga Bulshada iyo Bisaylka Siyaasadda Somaliland.
2. Shuruucda iyo Dastuurka Dalka oo si buuxda u damaanad qaaday xuquuqda aasaasiga ah ee Madax-bannaanida Saxaafadda.
3. Xasuusta xanaftii iyo xannuunkii laga dhaxlay nidaamkii ku dhisnaa cadaadiska, cago-juglaynta iyo cabudhinta loo gaysto xoriyatul qawlka.
1. inay ku shaqayso dhex-dhexaadnimo iyo madax-banaani.
2. inay dheeli-tirto wararka ay baahinayso.
3. inay ilaaliso ku dhaqanka shuruucda, anshaxa iyo asluubta suuban.
4. in ay dhawrto xuquuqda iyo xurmada dadka muwaadiniinta ah ee kale, sida ay xaq u leeyihiin in la dhawro xuquuqdooda iyo xurmadooda xirfadeed.
5. in ay birma-gaydo yeelato, oo si weyn u dhawrto arrimaha saamaynta ku leh qarannimada iyo amniga dalka.
1. Aasaasidda ama samaynta Xarun Saxaafadda u gaar ah iyo kobcinta aqoonta suxufiyiinta.
2. in Xukuumaddu kordhiso 2017-ka kharashka kabka ah ee SOLJA, iyada oo ay taakulayntan Dawladdu bilowday sannadkan 2016-ka.
3. In Bahda Saxaafadda, gaar ahaan Ururka Suxufiyiinta ee SOLJA, aanu iska kaashanno Dib-u-habaynta Shuruucda Saxaafadda.
Previous Shirkada TELESOM oo Ururka SOLJA ku wareejisay Qalab Warbaahineed